Fandaharana sekoly amin'ny sekoly Baltimore Ellicott - Blog Ellicott Dredges
Ny Ellicott dia mpiroborobo ny sekoly Baltimore City Middle School Progam
Tamin'ny volana Jolay 14, i Ellicott dia nanao fitsangatsanganana an-tsaha ho an'ny mpianatra eo afovoany Baltimore City miaraka amin'ny programa fahavaratra amin'ny Morgan State University, izay mampahafantatra ireo mpianatra tanora amin'ny famolavolana fanampiana an-tserasera (CAD).
Ny Profesora mpiara-miasa J. Kemi Ladeji-Osias, Ph.D., Dept. ny Electrical and Computer Engineering, ary ny mpiara-miasa aminy LaDawn Partlow, nitsidika an'i Ellicott niaraka tamin'ny mpampianatra azy ho anisan'ireo Verizon Innovative Learning Program ho an'ny vitsy an'isa.
Paul Quinn, VP Sales, dia nampiditra ireo mpianatra tany amin'ny dredges, manazava ny ataony sy ny fomba fiasan'izy ireo. Ny fanolorana sy ny horonantsary fohy nahafahan'ny mpianatra nahafantatra ny faritra sasany tao amin'ny dredge, toa ny mpanapaka, rehefa nitsangantsangana ny kianja fanamboarana izy ireo.
Taorian'ny sary vondrona (manoloana ny dredge Ellicott 670 efa niomana halefa), dia niditra an-tsokosoko ireo mpianatra ary nihodina namaky ny gara enina: Manufacturing Yard, Main Shop, Office Tour - Historical, Dredge Simulator, Solidworks 3D-Drafting Techniques, ary FEMAP / Fanadihadiana ara-drafitra.
Ny fitsangatsanganana sy ny demôro dia nisy fiantraikany tamin'ny fampidirana ireo mpianatra hahita ny fifandraisan'ny modely 3D sy ny fanamboarana lamba. Dr. Ladeji-Osias dia nanamarika fa ny fitsangatsanganana an-tsaha dia manome fotoana ireo mpianatra hianatra bebe kokoa momba ny mety ho mpiasan'ny injeniera sy ny fandrafetana.